Soo saaraha iyo Warshada ugu Wacan ee Toomaatigga ah ee Laba-geesoodka ah |Ipanda
Mashiinka dhejinta dhejiska ee labajibaaran ee tooska ah ayaa ku habboon in lagu dhejiyo calaamadaha dhejiska ee dhinaca hore iyo kan dambe ee dhalooyinka, dhalooyinka, iwm;kuwaas oo ah wareegsan, siman, oval, leydi, ama qaab afar gees ah.Xawaaraha calaamadinta waxay sidoo kale ku xiran tahay dhaqdhaqaaqa xasilloon ee alaabtu ku rarato qalabka, iyadoo xawaaruhu aad u sarreeyo.
20-60 dhalo / min
± 1mm ​​(waxay kuxirantahay saxnaanta diyaaradda)
Printer si loo isticmaalo hawada
Cabbirka summada ku habboon
2000 mm (L)×1000mm(W)×1360mm(H)
Si ballaaran loogu isticmaalo daawada, cuntada, cabitaanka iyo warshadaha kale ee shayga cylindrical ama dhalada siman ee shuruudaha calaamadaynta tooska ah.
1. Lagu dabaqi karo dawooyinka, cuntada, qurxinta iyo warshadaha kale, wareegga shayga wareega iyo saxnaanta sare waa (laba jeer) iyo barta go'an iyo booska ku yaal calaamadda dambe;Waxa kale oo uu la kulmi karaa shuruudaha calaamadaynta alaabta taper.
2. Nidaamka is-dhexgalka sare ee man-mashiinka is-dhexgalka, hawl-fudud, hawl dhammaystiran, wuxuu leeyahay hodanka caawinta internetka.
3. Dhalo gaar ah oo ku taal booska seddexda dhibcood, iska ilaali inaad si toos ah u calaamadiso mashiinka calaamadaynta dhalada waa mid aan joogto ahayn, dhaladana ma keento qaladka calaamadaynta qummanaanta, ka dibna waxay u ogolaataa calaamadaynta saxsan, qurux badan, salaaxid.
4. Ogaanshaha tooska ah ee korantada, waxa ay leedahay shaqada in aanay waxba ka iman gudbiyaha iyo calaamada ul oo aan lahayn calaamad si toos ah u saxid ama alaarmiga ogaanshaha tooska ah, ka hortagga daadinta iyo qashinka.
5. Qaab dhismeedka mashiinku waa mid fudud, cufan, fududahay in la shaqeeyo iyo dayactirka.
Habaynta tooska ah ee machadyada dhalada-hoosaadka, si toos ah u kala soocida ka hor kala fogaanshaha dhalada, si loo hubiyo dhalada hagaha la socodka, keenista iyo calaamadaynta xasiloonida;
Habka calaamadaynta laba-laaban waxaa loo habeeyey si loo hubiyo saxnaanta calaamadaynta iyo calaamadaynta nooca labaad ee extrusion markii ugu horeysay, si wax ku ool ah u baabi'inta xumboyada iyo hubinta in calaamaddu ay adag tahay;
Hore: Mashiinka Calaamadaynta Xabagta Qabow ee Tooska ah
Xiga: Mishiinka Calaamadaynta Horizontal
Mishiinka buuxinta dareeraha tooska ah Mashiinka Buuxinta Tuubbada Bistoon Mashiinka Buuxinta Saliida mashiinka buuxinta malab mashiinka buuxinta saliidda cuntada Mashiinka buuxinta malabka oo toos ah